Endrik'io pejy io tamin'ny 19 Septambra 2019 à 07:10
Endrik'io pejy io tamin'ny 19 Septambra 2019 à 07:06 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 19 Septambra 2019 à 07:10 (hanova) (esory)
Araka an'i [[Jobily Rakotoson]]<sup>[[Fanandroana malagasy#cite%20note-:0-2|]]</sup> dia mifandray amin'ny fanandroana ny singa tsirairay, dia ny [[rano]] sy ny [[rivotra]] sy ny [[tany]] ary ny [[afo]].
'''==== Rano''' ====
'''==== Rivotra''' ====
'''==== Tany''' ====
'''==== Afo''' ====
=== Ny vazantany sy ny zoron-trano ===
▲'''==== Avaratra''' ====
Lafy itoeran'ny vintana [[Adalo]] sy ny [[Alohotsy]] ny avaratra. Ao an-trano dia atao eo afovoany mahazo avaratra ny fatana. Ny avaratra dia vazantanin'ny fahefana sy ny fibaikoana ary ny fanjakana. Eo amin'ny misy ny Adalo no toerana fanajam-bahiny indrindra ao an-trano. Tandrify ny Alohotsy no fametrahana ny lovia sy ny sotro.
'''==== Avaratra atsinanana''' ====
'''==== Atsinanana''' ====
'''==== Atsimo atsinanana''' ====
'''==== Atsimo''' ====
'''==== Atsimo andrefana''' ====
'''==== Andrefana''' ====
'''==== Avaratra adrefana''' ====
'''==== Alakamisy''' ====
'''==== Zoma''' ====
'''==== Asabotsy''' ====
'''==== Alahady''' ====
'''==== Alatsinainy''' ====
'''==== Talata''' ====
'''==== Alarobia''' ====
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/974878"